Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Frenkie de Jong Ụmụaka Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
LB na -egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara de Jong. Anyị Frenkie de Jong Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị ya na midfield. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Frenkie de Jong's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Frenkie de Jong Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Frenkie De Jong na 12th ụbọchị nke May 1997 na Arkel na Netherlands, otu a na-ekwu bọmbụ football Brazil Marcelo A mụrụ.
A mụrụ Frenkie nne ya na-egwu bọl na nna ya John, bụkwa onye na-agba ọsọ na-amakarị onye egwuregwu maka ndị otu egwuregwu ASV Arkel.
Na mgbakwunye, nna nna Frenkie bụ onye na-agba ọsọ na-amakarị ebe nwanne ya nwoke nke tọrọ, Youri na-egwu A1 nke ASV.
Frankie toro na football na ASV Arkel nke obodo ya, na-enwe mmasị na ndị nne na nna na-egwu egwuregwu na-enwe mmasị na mmasị ya na egwuregwu ahụ. Dị ka onye na-akpọ Dutch:
"A na-ahụkarị m na-egwu bọl n'ime obodo ahụ na ndị enyi m. Ọ bụ egwuregwu m na-egwuri egwu mgbe ọ bụla m na-agaghị ụlọ akwụkwọ "
Frenkie dị mma n'ịgba bọọlụ, ọbụlagodi mgbe ọ dị obere, na-akpali mmasị sitere n'aka ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma bụ ndị chọrọ ịkpọrọ ya na klọb nke obodo ya, eziokwu nke nna ya gosipụtara n'ụzọ doro anya n'ụzọ a:
"Ndị na-egwu egwuregwu na-adị n'ọnụ ụzọ mgbe Frenkie dị afọ ise."
Frenkie de Jong Childhood BiogStory - Nrụpụta Ọrụ:
Nwatakịrị nwoke nwere ntutu nwere ntutu dị naanị afọ asaa mgbe nna ya lere ya anya dị ka onye tozuru etozu maka ịgba asọmpi asọmpi kwesịrị ekwesị.
Iji mezuo nke ahụ, Frenkie nọ n'afọ 2004, nke a nwalere maka nnwale na ndị dike Dutch Feyenoord na Willem II nke etiti okpokoro. Ihe egwuregwu bọọlụ gara nke ọma na ụzọ abụọ ahụ ma nwee nnwere onwe ịhọrọ.
Ọ bụ ezie na ọ ka pere mpe, Frenkie jiri amamihe họrọ Willem II klọb okpokoro karịa Feyenoord. Nhọrọ a bịara dị ka ihe ijuanya nye ezinụlọ ya n'ihi na ha bụ ndị na-akwado Feyenoord.
Agbanyeghị, ọ gosipụtara n'ikpeazụ na ndị Dutch chere ya nke ọma.
Frenkie de Jong Biography - tozọ a ma ama:
Ọ bụ na usoro ndị ntorobịa nke Willem II na Frenkie wuru ma mepụta àgwà ndị bụ njirimara nke ụdị egwuregwu ọ dị ugbu a gụnyere ike ya nwere ike ịme ka ihe kachasị sie ike dị mfe.
Nwa akwukwo a na-enwe obi uto na-aga n'ihu n'etiti ulo ndi ozo na-emetuta onye nduzi ya na ọkwa di iche iche dika onye nduzi 15, nke bu Willem II, Jos Bogers ndi na-agwughi ikwu okwu banyere ihe ndi ozo nke gafere na nche ya.
Kasper Dolberg Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
“Enwere m ajụjụ ọnụ maka webụsaịtị Willem II wee jụọ m gbasara onye ọkpụkpọ kachasị amasị m. N'ụzọ doro anya, ọtụtụ ndị nkuzi aha Cristiano Ronaldo or Leo Messi, mana ekwuru m Frenkie De Jong, ”Bogers kwuru. Ọ mara mma na teknụzụ.
Nke ahụ bụ talent eke. Ụfọdụ ụmụ okorobịa kwesịrị ịrụ ọrụ nke ukwuu ka ha wee ruo ọkwa ụfọdụ, mana Frenkie agaghị azụ ọzụzụ iji gosipụta ịdị mma ya. ”
'' Bogers edeturu banyere mmalite dị ebube nke Frenkie.
Frenkie de Jong Biography - Bilie na Ama:
Mgbe ọ na-akpọ maka usoro ntorobịa nke Willem nke Abụọ, Frenkie mere mmalite nke Eredivisie na 10th nke May 2015 n'oge egwuregwu nke hụrụ n'akụkụ ya meriri ADO Den Haag na mmeri 1-0.
N'ịgbaso mpụta mbụ ya nke ọma, klọb ole na ole nwara ijide ọrụ ya gụnyere Ajax na PSV. Agbanyeghị, Frenkie biri na Ajax, bịanyere aka na klọb ahụ nkwekọrịta afọ anọ n'oge ọkọchị nke 2015.
Mgbe ọ nọ na Ajax Frenkie debere klọb - Jong Ajax ebe o mere nnukwu mmetụta nke hụrụ ya ka ọ na -aga n'ihu na klọb klọb na 2016.
Mgbe ọ nwetara nkwalite nye ndị okenye, Frenkie nyeere ndị otu aka aka na 2017 Europa League ikpeazụ, mmepe nke n'etiti ndị ọzọ hụrụ ya ka ọ nweta Jupiler League's Talent of Season Award.
N'ihi ya, ndị isi klọb gụnyere Manchester United, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcelona na PSG chọrọ Frenkie bụ ndị kọrọ na ha gosiri mmasị ha nwere na ya site na ịrịọ ahịa. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Frenkie de Jong Mmekọrịta ndụ na Mikky Kiemeney:
Frenkie enweela mmekọrịta nke enyi ya nwanyị mara mma nke a maara dị ka Mikky Kiemeney. Birda ịhụnanya ahụ zutere ma malite mmekọrịta mgbe Frenekie ka na usoro ndị ntorobịa nke Willem II.
Mikky bụ onye na-egwu egwuregwu na-egwu hockey. Di na nwunye di na nwunye bi na Amsterdam n'oge edere Frenkie's Bio.
Otu n'ime ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ndị enyi nwee anyaụfụ maka mmekọrịta di na nwunye bụ eziokwu na ha abụọ na-amụmụ ọnụ ọchị otu. Ha abughi ndi zuru oke?
Frenkie de Jong Eziokwu Eziokwu- Untoldhụnanya Maka Barcelona:
Frenkie hụrụ Barcelona n'anya ogologo oge tupu ya ezute enyi ya nwanyị. Ndị Dutch toro na-ahụ n'anya ọ bụghị naanị akụkụ Spanish kamakwa ndị ọkpụkpọ kpakpando ya n'oge ahụ.
"Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Pique, Dani Alves, Pedro, Messi, Eto'o, Villa. Lee otu ìgwè! Guardiola otu kacha mma n'oge niile. Ọ bụ ọṅụ na-ekiri ha, ma m na-eche na a nrọ na-egwu megide. "
Mmasị pụrụ iche bụ ịhụnanya Frenkie nwere maka Barcelona Star ugbu a Lionel Messi onye ọ na-arọ nrọ na-egwu otu ụbọchị.
N'ezie, ọ ga-amasị m igwu egwu na Messi. Mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 31, ọ dị m mkpa iji ọsọ ọsọ (ọchị). Echetara m oge m bụ nwatakịrị otu nna nna m si nye m ihe a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Barcelona na Messi na azụ. M yi uwe elu a ruo mgbe ọ pere m pere mpe.
Ọfọn, nrọ ya dị nnọọ nso karịa ka ọ na - eche na Barcelona na - agbalị ịnweta mbinye aka dị ka n'oge edere akwụkwọ a.
Frenkie de Jong Ndụ Nke Onwe:
Frenkie bụ onye na-abata onye na-abata nso. Ọ bụ ezie na ọ na-egwu bọl na Ajax ma bi na Amsterdam ọ na-ahụkarị n'obodo ya ugboro abụọ n'izu.
Banyere ibi ndụ ya, Ọ naghị ahụ ihe onwunwe n'anya, ọ chọghịkwa ịma uwe dị oke ọnụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. N'akụkụ tụgharịa, Frenkie nwere ike ịbụ Onye isi ike, nwere ikike na enweghị nkwekọrịta.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Frenkie de Jong nwata yana akụkọ gbasara eziokwu.